JUVENTUS VS SSC NAPOLI, AC MILAN VS BRESCIA: Shaxda & safafka ay kusoo geli karaan! | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha JUVENTUS VS SSC NAPOLI, AC MILAN VS BRESCIA: Shaxda & safafka ay...
JUVENTUS VS SSC NAPOLI, AC MILAN VS BRESCIA: Shaxda & safafka ay kusoo geli karaan!
(Roma) 31 Agoosto 2019 – Waxaa caawa maqribkii iyo fiidkii kala dhacaya laba kulan oo ka tirsan Horyaalka Talyaaniga todobaadkiisa 2-aad, waxaana ku ballansan AC Milan v Brescia iyo kulanka adag ee Juventus vs SSC Napoli.
Dhanka Milan: Waxaa maqan Hernandez & Biglia, sidoo kale Caldara, Giampaolo ayaa u wareegaya shaxda 4-3-2-1, isagoo weli ku adkaysanaya Castillejo. Bonaventura ayaan weli si buuxda diyaar u ahayn. Calhanoglu-Paquetà ayaa hal boos isku haysta.
Dhanka Brescia: Balotelli ayaa kulankii 2-aad ganaax ku maqan. Donnarumma, ayaa weerarka kula lamaansan Torregrossa. Tremolada waxaa booska kala baxay Spalek.
Dhanka Juve: Waxaa Sarri dhib ka haystaa dhanka daafaca, isagoo uu ka dhaawacan yahay Chiellini oo dhowr bilood maqnaan doona, kaddib markii ay wax ka gaareen jilibka midig. Waxaa booskiisa buuxinaya De Ligt. Dybala waxaa ka horreeya Higuain, halka Rabiot laga door bidayo Matuidi.
Dhanka Napoli: Waxaa maqan Milik, oo aan loo yeerin. Maksimovic iyo Ghoulam ayaa ka horreeya Di Lorenzo iyo Mario Rui oo dadabyada buuxinaya, Lozano ayaa kaydka ku jira.
Previous articleOromo fara ba’an ku haysa degaanno ka tirsan Soomaali Galbeed & ciidamada DF oo garab siinaya! (Maxaa hadda dhacay?!)
Next article”Waxaa soo baxay 3 qolo oo ka qayb qaata burburinta Diinta Islaamka!” – Cabdiraxmaan Cabdishakuur